IMarike yokuHamba yaseArabia: Iimpawu zoKhenketho zokuziphatha ngoku ziThamba phambili
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » IMarike yokuHamba yaseArabia: Iimpawu zoKhenketho zokuziphatha ngoku ziThamba phambili
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Ivenkile yokuThengisa yaseArabia eDubai
I-RX Global, umququzeleli weMakethi yokuHamba yaseArabia (ATM), iveze ukuba ngo-2022 inokubona ukuvela kwakhona kwabakhenkethi abaziyo uphawu, kulandela amagqabantshintshi ayifumene kubathunywa ababezimase iisemina zayo zowama-2021 kunye nenyani malunga nokhenketho olunenkathalo.
Ingxelo esuka kwisemina yokhenketho enoxanduva yowama-2021 ichonge intsingiselo yemalike enokubakho enozinzo kunye nokwazisa uluntu kusembindini wesiseko sayo.
Iihotele, iinqwelomoya, kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide kuya kufuneka ziphile kwaye ziphefumle amaxabiso ebhrendi zazo.
Uluhlu olutsha lukaGoogle luya kwenza iihotele ziqinisekise iziqinisekiso zazo zokusingqongileyo.
“Ingxelo esiyifumeneyo, isenze sakwazi ukuchonga inkangeleko ethile yomhambi, ngoku ngokukhutheleyo ejonga iimpawu zokuziphatha eziya kuzilandela kwaye ifuna ukubona ubungqina obubambekayo bolu phawu lwenza le nto lubanga ukuba luyiyo.
“Oku kuthe nkqo kusenokubakho kubonisa indibaniselwano yeempawu ezibangelwa ngabakhenkethi bangaphandle, ukuba sempilweni, abakhenkethi bendalo, abakhenkethi bedijithali 'kwimisebenzi yokusebenza', abakhenkethi abanamava kunye nabakhenkethi abanolwazi ekuhlaleni," utshilo. UDanielle Curtis, UMlawuli weMiboniso, ME, Intengiso yeArabia.
Ngokwendalo sizakube sibonisa lo mkhwa uvelayo ngexesha lomsitho wethu we-2022 we-hybrid oqhubeka ngqo kunye nomntu eDubai World Trade Center nge-8-11 Meyi 2022, ngohlelo olubonakalayo nge-17 kunye ne-18 kaMeyi ka-2022.
“Inkqubo yethu yenkomfa ye-ATM 2022 isaqulunqwa kodwa sele sineeseshoni eziza kujongana nemiceli mngeni ejongene neenqwelomoya, iihotele nezinye iindawo, kwikamva elingephi, ezifana nezempilo nokhuseleko, ubuchwepheshe kunye nobulungisa kwezempilo, imfundo, noqoqosho. ithuba,” wongeze watsho uCurtis.
Ngexesha leesemina zethu zokubhabha ngenqwelomoya kwi-ATM ka-2021, iingcali zabona ngathi iya kuba lixesha lokuphumla elifutshane, ukuthanda abaqhubi bexabiso eliphantsi kuya kuba ngabokuqala ukuchacha emva kobhubhane. Nangona oko kusenokubonakala kunjalo, eli candelo lemarike evelayo ngokuqinisekileyo aliyi kuphelela kwindawo enye, liya kukhetha iindawo zokuhanjwa ezinde kwaye lihlale ixesha elide, lidibene namaxesha omsebenzi.
“Undoqo apha uyafana kakhulu nangona kunjalo. Abakhenkethi basafuna ukubona iimpawu ezizibophelele kwimpilo nokhuseleko kunye nobungqina obubambekayo besicwangciso esizinzileyo esifana nesiqinisekiso nombutho ozimeleyo,” utshilo uCurtis.
Ukugxininisa loo mfuno, ngokwedatha yemarike kwi-Statista, i-81% yabantu abadala be-29,349 abahlolisiswe ekuqaleni kwalo nyaka, kumazwe angama-30 aqinisekisile ukuba angathanda ukuhlala kwindawo ezinzileyo, ubuncinane kanye kwiinyanga ezili-12 ezizayo. Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, kuphela i-62% yabaphenduli, benza ibango elifanayo.
Enyanisweni, uGoogle wafumanisa ukuba igama lokukhangela "ihotele eluhlaza," liye landa ngokuphindwe kane kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo ngokomthamo. Ke, ukunceda abakhenkethi bendalo, uGoogle ngoku uza kuvuma iihotele nge-eco-emblem eluhlaza ecaleni kwegama labo ngexesha lokhangelo lwesiqhelo. Iyakongeza kwakhona iinkcukacha zomgaqo-nkqubo wozinzo oluthile lwepropati kunye neenkqubo kunye nemisebenzi. Ukuze zifaneleke, iihotele kufuneka ukuba impumelelo yazo iphicothwe ngumntu wesithathu othembekileyo.
“Oku kuya kubonelela elubala ngakumbi kwiindwendwe ezinokubakho kwaye kuncede ukuvuza iihotele ngempumelelo yokwenyani yokusingqongileyo,” utshilo uCurtis.
UkuHamba Phambili, umsitho wehlabathi okhokelayo kubuchwepheshe bokuhamba obeka itekhnoloji yamva nje, iteknoloji yesizukulwana esilandelayo sohambo kunye nokwamkela iindwendwe, iiforam zabathengi be-ATM kunye neziganeko zothungelwano olukhawulezayo, kunye ne-ARIVAL Dubai @ ATM. Ngokusebenzisa uthotho lweewebinars le foramu ezinikeleyo igubungela iindlela zangoku nezexesha elizayo zabaqhubi bokhenketho kunye nezinto ezinomtsalane ezigxile ekukhuleni kweshishini ngokuthengisa, itekhnoloji, ukuhanjiswa, ubunkokeli bengcinga kunye nonxibelelwano lwenqanaba lesigqeba.
I-ATM 2022 nayo iza kubamba iingqungquthela zenkomfa ezizinikeleyo kwiGlobal Stage, ezibandakanya ezomoya, iihotele, ukhenketho lwezemidlalo, ukhenketho lokuthengisa kunye nesemina ekhethekileyo yokwamkela iindwendwe. IGlobal Business Travel Association (GBTA), inkulumbuso yehlabathi yezohambo lweshishini kunye neentlanganiso zentlangano yorhwebo, iya kuphinda ithathe inxaxheba kwi-ATM. I-GBTA iya kuhambisa umxholo wamva nje wokuhamba kweshishini, uphando kunye nemfundo ukuqhuba ukubuyiswa kunye nokuxhasa ukukhula kohambo lweshishini.
I-Arabian Travel Market (i-ATM), ngoku ekunyaka wayo wama-29, yeyona nto iphambili, yohambo lwamazwe ngamazwe kunye nesiganeko sokhenketho kuMbindi Mpuma weengcali zokhenketho ezingenayo neziphumayo. IATM 2021 ibonise ngaphezu kwe-1,300 yeenkampani ezibonisayo ezivela kumazwe angama-62 kwiiholo ezilithoba kwi-Dubai World Trade Centre, kunye neendwendwe ezivela kumazwe angaphezu kwe-140 kwiintsuku ezine. IMarike yokuHamba yaseArabia yinxalenye yeVeki yokuHamba yaseArabia. #ImibonoFikaApha
Isiganeko esilandelayo somntu: NgeCawa, ngoMeyi 8 ukuya ngoLwesithathu, 11 May 2022, Dubai World Trade Centre, Dubai.